မီးရှို့ ခံလိုက်ရတဲ့ သိန်းထောင်ကျော်တန် သူ့ရဲ့ကား အတွက် နာကျည်း ဝမ်းနည်း နေတဲ့ ယုန်ပေါ – Shwe Likes
ယုန်လေး ကတော့ သူ့ကား မီးရှို့ခံလိုက်ရ တာကြောင့် လူတွေရဲ့ အကုသိုလ်၊စိတ် ဓာတ်အခြေအေ နတွေဆိုးလာေ ကြာင်း ကိုသူ့အကောင့်မှာ တင်ထား ပါတယ်နော်။ အများစု ကတော့ ယုန်လေးကိုယ်တိုင်သူ့ကား ကိုမီးရှို့တာလို့ ပြောနေကြပေမယ့် ကာယကံရှင် ကတော့ မဟုတ်ေြ ကာင်း ငြင်းဆိုထားပါ တယ်နော် ။ “ အခု မှ လိုင်းရတဲ့ နေ ရာရောက်လို့ပါ ဒလံ ဆိုတဲ့ စကားအဓိ ပ္ပါယ်ကို သေချာ နားလည်နိုင်ပါစေ အရင်ထဲက မကျေနပ်တာတွေ နဲ့ ရော ပြီး ဒလံ ဆိုတာနဲ့ မရောထွေးပစ်ပါနဲ့ .ဒီနေ့ ဒီချိန်ထိ သူတစ်ပါးကို ဒုက္ခရောက်အောင်
မီးရှို့ ခံလိုက်ရတဲ့ သိန်းထောင်ကျော်တန် သူ့ရဲ့ကား အတွက် နာကျည်း ဝမ်းနည်း နေတဲ့ ယုန်ပေါလေး
မလုပ်ဖူးပါဘူး ဒုက္ခရော က်နေတဲ့ လူတွေကိုသာ သူတို့ ဒုက္ခတွေကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့တာပါ ကျွန်တော် ကူညီပေးခဲ့တဲ့ လူတွေပါ အဖြေတစ်ခု ဖြစ်စဉ်ကို သေချာ မသိဘဲ ဆဲနေတာတွေ မြင်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ဒီလောက်ပါပဲ . ကလဲ့စားချေတယ်ဆိုတာ ဘဝ မှာမရှိခဲ့ဘူးပါ . နောက်လည်း မရှိပါ အရင်ထဲကလည်း ကူတယ် ကယ်တယ် ဒီအလုပ်ပဲ လုပ်နေတာ အခုလည်း ကူတယ် ကယ်တယ် . ဒါပဲ လုပ်တာပါ အနုပညာ သမားတွေ နဲ့ ပက်သက်ပြီး နောက် Post တင်ပါမယ် ကားကိစ္စပြောချင်ပါတယ် အာမခံ မထားထားတဲ့ အမှားက အဆိုးထဲက အကောင်းဖြစ်လာတယ်
ဆုံးရှုံးတာ ကျွန်တော်ပါ ကျွန်တော် ကိုယ့် ကားကို ကိုယ်တိုင်ရှို့တယ် လို့ထပ်စွတ်စွဲတယ် သိန်း ၂၀၀ နဲ့ ပေါင်ထားတယ် ထပ်ပြောတယ် လူတွေ အကုသိုလ် နဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ အခြေနေတွေတော်တော်ဆိုးသွားပြီ ကျွန်တော် OG2က ရတဲ့ ရုံဝင်ကြေးနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ ကား ဘဝ ပြန်စတဲ့ အချိန် ပြန် ဝယ်နိုင်တဲ့ ကား ကျွန်တော်တန်ဖိုး ထားတဲ့ ကား ဘယ်လောက် ပေးေ ပးမရောင်းဘူး ကျွန်တော် ပြန်ရှို့ပါ့ မလား သိန်း ၂၀၀ နဲ့ ပေါင်ပြီး အပေါင်ဆုံးချင်တယ်လို့ ပြောရအောင်လည်း သိန်း ၂၀၀ မက တန်ပါတယ် မီးရှို့စရာရောလိုလိုလား ကျွန်တော် အနုပညာ
သမားပါ ကျွန်တော် ကို ပွဲဖိတ်လို့ဆိုတယ် ပြီးတော့ ကိုယ့်လူတွေကို ကူကယ်တဲ့ ကိစ္စတွေ လုပ်နေလို့ ဆိုပါတယ် ဒါပါပဲ . ဝဠ်ကြွေး များရှိခဲ့ရင် ဒီ ဘဝ ဒီမှာတင်ကြေပါစေ ကိုယ်စိတ်ကိုယ်သန့်တယ် ကိုယ်စေတနာ ကိုယ် အကျိုးပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် .” လို့ ရေးသားထားတာပါနော်။